Ụbọchị My Pet » Ọ Right daa na ịhụnanya na-A di Man?
emelitere ikpeazụ: Dec. 04 2020 | 3 min agụ
E nwere ọtụtụ ndị inyom na-ada na ịhụnanya na ndị ikom lụrụ nwunye n'amaghị ama, mgbe ọtụtụ ndị ọzọ ụma na-achọ ndị ikom lụrụ nwunye maka obi ụtọ (pun zubere) nke ịbụ na a onye bụ nyochawa un-inaha. Otú ọ dị, ajụjụ mgbe niile na-anọgide na dị ka ma ọ bụ ihe ziri ezi na-ada na ịhụnanya na onye lụrụ di?
Ụra di na nwoke nwere ike iyi nri, karịsịa ma ọ bụrụ na nwoke na-ekwu na ha na-eche otu ihe ahụ dị mma. Na mgbakwunye, nwaanyị na ọnọdụ dị otú ahụ nwekwara ike ịnweta a ụgha uche nke nche na nwoke ga-nọpụ nwunye, nke mere na ha na mmekọrịta ha nwere ike okooko Iweputa. Otú o sina dị, a aghụghọ, na kwesịrị-agbajikwa ala kpam kpam ndị na-esonụ.
Women aghaghị ịmụta na-akwanyere onwe ha
A nwoke a ezinụlọ ga-enwe ike na-enye otu nwaanyị afọ ojuju nke ịbụ na a n'ezie mmekọrịta. Ọ bụrụgodị na nwoke na-ewere oge ya na-elekọta ya na-elekọta, n'anya, na onyinye, nke bụ eziokwu bụ, ọ ga-agbanwe agbanwe a ihe!
Nwaanyị dị otú ahụ ga-nakwa na-agbalị-etinye onwe ha akpụkpọ ụkwụ nke nwunye nwoke. Olee otú ha ga-adị ma ọ bụrụ na nwaanyị ọzọ mere otu ihe ahụ ha? Ọ bụrụ na ha n'ezie na-akwanyere onwe ha, mgbe ahụ, ha kwesịrị ịghọta na naanị ihe ha ga-ejedebe na-eme bụ gbasaa a ezinụlọ, na na na-a labeelu nwanyị ọ bụla chọrọ ka, Atụrụ m anya!
Ndị ikom ga-ịhapụ nwunye ha
Ọbụna ma ọ bụrụ na ndị ikom na-abụ abụ ugboro ugboro na ha ga-ekewapụ si nwunye ha anya nke mere na ha nwere ike a n'ezie mmekọrịta ọhụrụ ya chọtara ịhụnanya, na ọ bụ mgbe na-aga ime. Ọ bụrụ na ndị inyom bụ ndị na-ahụ na-ekweta na-enwe mmekọrịta na ha, ha maara na ha nwere ezinụlọ, mgbe ahụ ndị ikom ga-esi n'ime a nkasi obi mpaghara. N'okwu a, ha ga-maa chọrọ ịnọgide na-enwe ọnọdụ-quo, ebe ọ bụ na ha ga-ịchọghị ka ha hapụ ezinụlọ.
Chee echiche nke nwoke ahụ na ezinụlọ
Women, adịghị ga-adị naanị! Tupu ị na-ekpebi-enwe mmekọrịta na di na nwunye nwoke, na-echeta ezinụlọ nke na-aga na-bibiri. Ọnọdụ ga-aka njọ ma ọ bụrụ na e nwere ụmụaka aka. The ụmụ ga-ndoro-abụ ndị kasị njọ na-emetụta ma ọ bụrụ na nwoke ekpebie ahapụ ha. Ma, ka anyị ghara ichefu na nwunye, onye nwere ike kpara aka ọjọọ n'ihi na ndụ.
Ọ bụrụ na n'ihi ihe ọ bụla ọzọ, mgbe ahụ ndị ezinụlọ unit kwesịrị kwenye nwaanyị na ọ bụghị nri na-ada na ịhụnanya na onye lụrụ di.
Women ekwesịghị dozie ihe na-erughị kwesịrị ha
Gịnị mere n'ụwa, ga a mara mma, ọgụgụ isi na smart nwaanyị chọrọ dozie maka onye nwere ike ghara mere na a n'ezie mmekọrịta, nanị n'ihi na mmadụ na-lụrụ di na nwunye? Ọ gaghị dị otú ahụ a nwaanyị-aka mma oyi na-achọ otu onye ga-n'ụzọ zuru ezu nye inwe a n'ezie mmekọrịta? Women mkpa mee elu ma kwere na ha na ha ikike iji na-adọta a otu nwoke, na onye ha nwere ike ịkekọrịta a mmekọrịta enweghị ihe jikọrọ.
Ọ bụ dịkwa mma ihe na-ewute banyere agbasa ịhụnanya akwu
Ịhụnanya bụ otu n'ime ndị kasị sie ike mmetụta uche na-achịkwa. Dị nnọọ ka a nwaanyị nwere ike n'ezie na miri n'anya onye lụrụ di, nke bụ eziokwu bụ na mmekọrịta na-adịghị n'isi bụla. N'ihi nke a, ọ dị mma na-akwụsị ya mee elu mee, kama ka e mesịrị, ka-ezu oge ịgwọ agwọ. Jide n'aka na ọ ga-adị mfe mgbe nile, ma ọ ga-kwesịrị ya na ọgwụgwụ.
Unu ga-ịṅagharị echiche nke ndị ọzọ
A nwaanyị na a mmekọrịta a lụrụ di na nwunye nwoke ga-ekpe ikpe site na ndị ọzọ si niile n'akụkụ. Nwanyị, si otú, kwesịrị ịbụ ike na-agbaji oyi na nwoke n'ihi na ọ bụ ihe ziri ezi ime. Na mgbakwunye, ọ bụ n'ihi na nwaanyị ahụ uru na-agbaji ya anya, na-enwe ike izute nwoke na-nwere ike n'ụzọ zuru ezu mbọ iji na-enwe mmekọrịta.
Unu kpọtụrụ nwoke n'ihi ihe ọ bụla
Ozugbo a nwaanyị etịbede na onye lụrụ di, mgbe ahụ, ọ dị oké mkpa na-akwụsị na ụdị nile nke na kọntaktị na nwoke. The nwaanyị kwesịrị ọbụna ịgbanwe kọntaktị nọmba a na-eji na-esi na aka na nwoke. Nke a ga-abụ mmalite nke agwọ usoro.
Ọ dịghị onye nwere ike ịchịkwa onye ọ ada na ịhụnanya na-, Otú ọ dị, ọ dị mkpa icheta na ọ bụghị nri na-ada na ịhụnanya na onye lụrụ di. On na ndetu, n'ihi na ndị inyom bụ ndị na-ama na ịhụnanya na ndị ikom lụrụ nwunye, ya oge maka a gbasaa!
Gịnị Women Chee Banyere N'oge Mmekọahụ
Top 6 Mere Nri bụ Hot maka Romance
Gịnị mere Men Ịhụnanya Heartless Queen aṅụ